Apple Starts Selling Locally Assembled iPhone XR in India | Myanmar Business Today
Home MMBIZ News Apple Starts Selling Locally Assembled iPhone XR in India
Auto-rickshaws drive past the hoardings of Apple iPhone X mobile phones in Mumbai, India July 27, 2018. Picture taken July 27, 2018. REUTERS/Francis Mascarenhas
ဈေးသက်သာသော ပြိုင်ဘက်များကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒုတိယအကြီးဆုံး စမတ်ဖုန်း ဈေးကွက်ဖြစ်သော အန္ဒိယတွင် ဈေးကွက်ဝေစုရရှိရန် အခက်ကြုံနေသော Apple Inc သည် ယခုအခါတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်သော iPhone XR များကို စတင်ရောင်းချနေပြီဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဖုန်းများအား တိုင်ပေအခြေစိုက် ကန်ထရိုက်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း Foxconn၏ အန္ဒိယစက်ရုံတွင် တပ်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။
“အန္ဒိယတွင် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်သည်”ဟူသော စာတမ်းပါသည့် အိုင်ဖုန်းများကို အိန္ဒိယတွင် စတင်ရောင်းချနေပြီဖြစ်ကာ 64 GB အိုင်ဖုန်းများကို အိန္ဒိယရူပီး ၄၉၉၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၀၄ ဒေါ်လာဖြင့်) ရောင်းချနေသည်။
Samsung နှင့် OnePlus တို့ထံမှ ပြင်းထန်သော ပြိုင်ဘက်များကြောင့် ရောင်းအားများ ကျဆင်းနေမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် iPhone XR ဈေးနှုန်းများကို လျှော့ချရောင်းချနေသည်။
အရှေ့တောင်အာရှတွင် တတိယစီးပွားရေးအင်အား အကြီးဆုံးဖြစ်သော ‌အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်ရေးအတွက် ဗဟိုဌာနတစ်ခု အဖြစ်ဖန်တိးရန်အတွက် အိန္ဒိယအစိုးရက ကြိုးပမ်းနေသည်။
Apple ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီများကတော့ အမေရိကန်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံအကြား ဖြစ်ပွားနေသော ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ၏ ထိခိုက်မှုများအား လျှော့ချနိုင်ရန်အတွက် အိန္ဒိယကို ပို့ကုန်ဗဟိုဌာနတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုရန် စဥ်းစားနေကြသည်။
Previous articleMarriott Signs Deal With Yoma Land to Bring Westin Brand to Myanmar
Next articleIndia’s Mobile Operators Face $13 Bln Bill After Court Ruling